Munaasabad Lagu So Dhoweynayay Aqoonsiga Degmada Saaxo iyo Wasiirka Waxbarashada Puntland Oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Minneapolis(sawirro) | Munaasabad Lagu So Dhoweynayay Aqoonsiga Degmada Saaxo iyo Wasiirka Waxbarashada Puntland Oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Minneapolis(sawirro) – Latest News
« EU ‘appalled’ by migrant dead off Italy
Wafdi ka socda maamulka Puntland oo todobaadkan gudihiisa booqan doona degmada… »
Munaasabad Lagu So Dhoweynayay Aqoonsiga Degmada Saaxo iyo Wasiirka Waxbarashada Puntland Oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Minneapolis(sawirro)
Published August 25, 2014 | By gtimes
Minnepaolis (GT)-Munaasabad lagusoo dhaweynayay aqoonsiga degmada Saaxo ee gobolka Mudug oo dhawaan ay meel mariyeen golaha wasiirada ee dowladda Puntland ayaa xalay lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minneosta.
Waxaa munaasabadaan ka qeyb galay odayaasha, waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo jeeda degmada Saaxo iyo Jaaliyada Puntland ee gobolka Minnesota.
Waxaa kahadlay munaasabada suldaan Abuukar Jaamac Gaardi isagoo aa uga mahad celiyay madaxweynaha dowlada Puntland Dr Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas aqoonsiga uu siiyay degmada Saaxo. Waxuu suldaan Abuukar sheegay mowqifkii ay qaateen dowlad Goboleedka Puntland inay ka turjumayso cadaalada iyo sinaanta iyo weliba baahida dadka degmada Saaxo uqabaan in laga dhigo degmo si ay uhesho adeegyadii bulshada laga maarmaanka u ahaa sida, waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha.
Waxgaradkii ka hadlay xafalada Waxay madaxweynaha iyo golahiisa xukuumada ugu baaqeen inay soo dhameystiraan waxyaabihii ay talo galeen degmada Saaxo si ula tartanto degmooyinka Puntland ee ka soo horeeyey.
Waxaa kaloo xaflada lagu soo dhoweeyay wasiirka waxbarashada Puntland Mudane Cali Xaaji Jaamac oo maalmahaan booqasho ku marayay dalka Mareykanka. Jaaliyada Puntland ee gobolka Minnesota waxey muujiyeen taageerada iyo soo dhoweynta ay u hayaan in Madaxeyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu magaalada Saaxo u dalacsiiyo Degmo buuxdo.
Masuuliyiinta iyo waxgaradka Jaaliyada Puntland ee gobolka Minnesota ayaa wasiirka ugu xogwaramay xaalada jaaliyada iyo xiriirka dalka, waxeyna wasiirka kusoo dhoweeyeen gacmo furan.
Mudane Cali Xaaji oo khudbad dheer u jeediyey jaaliyada ayaa ugu xogwaramay waxqabadka xukuumada cusub iyo halka ay tiigsaneyso. Wasiirka waxuu ku dheeraaday wasaaradiisa waxbarasha oo uu xog dheer ka siiyey jaaliyada mudadii uu xilka hayay. Sidoo kalan Mudane Cali Xaaji waxuu ka waramay xariirka Putnland kaga dhaxeeyo dowlada Federaalka ee magaalada Muqdisho.
2 Responses to Munaasabad Lagu So Dhoweynayay Aqoonsiga Degmada Saaxo iyo Wasiirka Waxbarashada Puntland Oo Xalay Lagu Qabtay Magaalada Minneapolis(sawirro)
qasim a/kariim on August 26, 2014 at 4:45 am
Abdifatah Ahmed Barre on August 26, 2014 at 6:08 pm
Aad baan ugu faraxsanahay inay Gelinsoortimes soo bandhigtay xafladii aad u quruxda badnayd ee ka dhacday Ramada Hotel ee Minneapolis oo aan kusoo dhwaynay Degamadeena cusub ee Saaxo iyo Wasirka waxbarashada ee Puntland Cali xaaji Warsame. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii xafladaan soo abaabulay ee waqtiga galiyay marka aad bay ii farax galisay inaan ku arko website ka u adeega bulshada kasoo jeeda saaxo ee gelinsoortimes. waxaan mahad u celinayaa Tafiiftiraha website ka Shuurye Ganeey salaad oo runtii u taagan inuu hor umariyo website gelinsoortimes.com